Mareykanka oo baahiyey Filim Osama Bin Ladin oo is daawanaya (Sawiro + Video) – SBC
Mareykanka oo baahiyey Filim Osama Bin Ladin oo is daawanaya (Sawiro + Video)
Waaxda difaaca Mareykanka ee the Pentagon ayaa maanta baahisay filim muuqaal ah oo ay sheegeen in laga helay guriga lagu diley Osama Bin Ladin, kaasi oo la sheegay in Osama qudhiisa laga duubay ayna ka duubeen gacan yarayaashiisa.
Filimka waxaa ka muuqda Osama Bin Ladin oo gar weyn oo ciro badan leh isla markaana huwan buste weyn gacanta ku haysta remote control uu ku bad badlayey Telefishin uu daawanayey.
Warbixin ka soo baxdey waaxda difaaca Mareykanka ee la xiriirta muuqaalkan waxay sheegaysaa in Osama uu daawanayey filim muuqaal ah oo isaga laga duubay kaasi oo ay ku sheegeen in uu ahaa wax loogu yeeray propaganda kaasi oo ay ula jeedaan fariimaha Osama uu diro caalamka ee ku aadanaa dagaalkiisii ka dhanka ahaa Mareykanka u xulafadiisa.
Muuqaalka Osama daawaneyey waxaa lagu sheegay in uu daawanayey fariin uu baahiyey oo xiligaasi ka socotey Telefishin aan la sheegin midka uu yahay, iyadoo filimkan la sheegay in ay soo heleen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee Navy Seals ee weerarka ku qaadey 2-dii bishan guriga Osama Bin ladin. Filimka oo ka koobnaa shan qaybood waxaa kale oo ku jirey muuqaal Osama oo taagan oo dhabarka dambe uu ka dambeeyo alwaax ama safiito, waxaa uu fiirfiirinayey geeska midig taasi oo u muuqanaysay in uu ka qaadaneyey tusaale qof u muuqdey in uu ka duubayy Camerada. Saraakiisha Mareykanka waxay ku sheegeen in baahinta filimkan ay uga gol leeyihiin inay aduunka u cadeeyaan ciidamada Navy Sels ay dileen Osama Bin Ladin.
Halkan ka daawo Filimka Pentagon-ka oo uu baahiyey Tv-ga CNn